Munich na-eme Oktoberfest: Ọbụna Terminator nọ ebe ahụ
Location: Mbido » Ịdee » Nzukọ (MICE) » Munich na-eme Oktoberfest: Ọbụna Terminator nọ ebe ahụ
Dirndl - ma ọ bụ enweghị dirndl - nke ahụ bụ ajụjụ ahụ. Maka ndị obodo, ọ bụ ihe dị mkpa, na maka ndị njem nleta na Munich Main Railway Station, enwere ọtụtụ ụlọ ahịa dị njikere n'elu ikpo okwu maka ndị chọrọ iyi akụkụ ahụ. Mgbe ị na-apụ n'ụgbọ oloko, maka ndị rutere n'èzí, ọ bụ nri ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa ngwa.
Anọ m na-aga n'azụ ụmụ agbọghọ Japan na-enweghị nku ume na ara ndị na-erughị ara ha na-ahapụ ọdụ ọdụ obere dirị na-agba m ume obere oge. Maka ụmụ nwoke, ọ bụ Lederhosen - na ihe dị mkpa maka Arnold Schwarzenegger nakwa onye rutere na Tuesday ma maa jijiji na tebụl ya n'otu n'ime ụlọikwuu biya.
Tlọ ntu ndị mbụ na nke pere mpe malitere na 150 afọ gara aga na 1867, na-anabata ihe karịrị mmadụ 50 ma nwee obere ọkụ mmanụ n'abalị. Nke a agbanweela ugbu a. Tentlọ ntu kachasị ukwuu bụ ụlọikwuu Löwenbräu ma nwee ike ịnabata ndị ọbịa 10,000. Ma ọ bụ ma ọ bụ obere obodo… n'ụlọikwuu… nnukwu ụlọikwuu.
N'afọ a, Oktoberfest ga-anọ ụbọchị abụọ karịa, na-agwụ na Ọktọba 3, yana ọkara ọnụahịa Ezinụlọ na Mọnde, Ọktọba 2.
Oge gboo n’ụdị ọkụkọ, pretzels, na biya ka bụ nri kachasị amasị n’ụlọikwuu ahụ. New bụ esiwanye dịgasị iche iche nke anaghị eri anụ na vegan efere.
Ruo ugbu a, ehi 60 (na 2015 ọ bụ 55) ka erichapụrụ na Ochsenbraterei na ụmụ ehi iri abụọ na Kalbsbraterei.
Foto site n'ikike nke eonline
Nri ị ga-aga nwere nwayọ nwayọ n'ihi ihu igwe mmiri ozuzo, mana ozugbo igwe gbachapụrụ, soseji anụ ọkụ, salmọn, na sandwiches Leberkäse bụ ndị ama ama dịka ọ dị. Ọnụ ọgụgụ nke efere na ihe ọ drinksụ drinksụ na-ere ere dị ka ọkwa dị na afọ gara aga.
Oge oyi na ụbọchị mbụ nke Oktoberfest dị egwu maka ndị niile na-ere ahịa n'èzí na ogige ntụrụndụ mara mma.
Mgbe Oktoberfest Lost and Found Office nọ na-eme nke ọma ruo abalị Satọdee, ọfịs ahụ gụrụ ihe dị 1,300 - n'etiti ha 350 iberibe uwe, akwụkwọ ikike 350, akwụkwọ nta 120, ekwentị 110 na ekwentị mkpanaaka, iko iri abụọ na otu, 110 nche anwụ, igodo 100 , Akpa 85 na akpa azu, iberibe ọla ọla iri atọ, kamera iri, otu ihe dị iche, otu flugelhorn, otu okpu Napoleon, otu uwe ndị mọnk, otu akwụkwọ Oktoberfest nke nwere obere ego (nke ọnụ ahịa ya ruru euro 35), agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ abụọ (ma ihe osise ahụ ), Paddles 30, ndị na - enyocha shuga 10 ọbara na otu ikiri ụkwụ dị elu.
Ndị obodo na-emekọ ọnụ na ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile: Ọ bụ ezie na ọnụọgụ ndị ọbịa si hastali agbadatala, ndị ọbịa si USA bịara Oktoberfest. Otú ọ dị, e nwekwara ọtụtụ ndị ọbịa si Switzerland, Asia, Australia, Netherlands, Portugal, na Spain.
Ndị ọbịa ahụ nabatara usoro nchekwa a ka mma, ha tokwara ndị na-elekọta ụlọ ahụ maka etu ha si nwee ọyị.
Oktoberfest, Josef Schmid, nabatara ndị uwe ojii na ụmụ nwanyị, ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ, na ndị ọrụ enyemaka si Italy na France.
Ebe ọ bụ na etiti izu ụka nke Oktoberfest bụ "izu ụka Italiantali," ndị uwe ojii Munich na ndị ọrụ nnapụta na-akwado ndị Italian, na nso nso a ndị agha France. Nke a na-eme ka nkwukọrịta n’oge ihe dị mfe karị.
Na ọkara oge nke Oktoberfest, ndị isi na-eme atụmatụ na e nwere ndị ọbịa 3 nde dị ugbu a yana ihu igwe mara mma, Munich na-enwe olileanya ịbịaru nde mmadụ isii ọzọ site na njedebe nke "WIESN."
Ọnụ ego ụlọ oriri na ọ ratesụ Hotelụ bụ ọdụ rọketi dị elu, yabụ Airbnb. Studentsmụ akwụkwọ America abụọ zụtara ngwa ngwa dirndl ngwa ngwa, na-ekpori ndụ ụbọchị 4 nke oke ọ atụ na Oktoberfest, ebe ha na-akwụ euro 320 maka obere ime ụlọ na Airbnb.
Dabere na Airbnb, ihe karịrị ndị ọbịa 35,000 na-eji ọrụ ha na Munich, a na-erekwa ụlọ obibi nke Airbnb ụbọchị abụọ tupu mmalite nke Octoberfest.
Ma gịnị kpatara eji akpọ Oktoberfest "Oktoberfest" mgbe ọ malitere n'ezie na Septemba?
Akụkọ ihe mere eme: E mere Oktoberfest mbụ na afọ 1810 maka nsọpụrụ nke ọlụlụ Bavarian Crown Prince Ludwig na Princess Therese von Sachsen-Hildburghausen. Ememme ahụ malitere na October 12, 1810 wee kwụsị na October 17 na ịgba ịnyịnya. N'afọ ndị sochirinụ, a na-eme ememme ahụ ọzọ, emesia, ememme ahụ dị ogologo ma gaa n'ihu na Septemba.
Site na ịmegharị ememme ndị ahụ, o nyere ohere maka ọnọdụ ihu igwe ka mma. Ebe ọ bụ na abalị Septemba na-ekpo ọkụ karị, ndị ọbịa bịara nwee ike ịnụ ụtọ ubi ndị dị n'azụ ụlọikwuu ahụ ma na-agagharị na "die Wiesn," ma ọ bụ ubi, ogologo oge karịa na-enweghị obi oyi. Kemgbe ụwa, Oktoberfest ikpeazụ nke izu ụka bụ na Ọktọba, ọdịnala a na-aga n'ihu n'oge a.
Hilton Garden Inn mepere na Shiya, China
Ozi na ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa site n'aka minista njem na njem ụgbọ elu nke Grenada Dr. Clarice Modeste Curwen
Airportgbọ elu Riyadh ugbu a na-enye ọkwa ụgbọ elu na ...
GVB na-akwado maka ncheta afọ 55 nke mbụ Japan…
Ọrịa Akụrụ: Ihe ize ndụ ahụike zuru ụwa ọnụ
A kwadoro ọgwụgwọ mbụ na EU iji kpata ihe kpatara ...
Ihe niile gbasara ngafe Summer ọhụrụ maka ndị njem nlegharị anya na Abu Dhabi
Ụlọ ahịa ahịa ebe dị na Ukraine ọhụrụ ...
Onye ọka ikpe Britain emebiela Qatar Airways na Airbus…
Rome na-ezute ihe ịma aka nke iweghachite njem nlegharị anya…
Ozi Nchọpụta Ọhụrụ Banyere Ndụ Mgbe Anwụsịrị
IATA: Mmụba ibu ụgbọ elu na-aga n'ihu na February, gbagoro 2.9%